रोल्पा समाचारको १४ औँ वाकिोत्सवसँगै हाम्रो नाफाको जीवन – रोल्पा समाचार
२०७६ पुष २६, शनिबार १५:३९ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ पुष २६, शनिबार १५:३९ गते
पत्रकारिता पेशा आफैमा निकै सम्बेदन शील विषय हो । यही पत्रकारिता पेशाबाट जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुरा अझ महत्पूर्ण विषय हो । यही पेशालाई अंगाल्ने क्रममा युद्धपत्रकारिताको माध्यमबाट नयाँ नेपालको लागि योगदान गर्ने अवर पनि प्राप्त भएको थियो । जो सुकैलाई यस्तो अवसर हुँदैन थियो । जो अबसर प्राप्त म लगायत हामी धैरै जना साथाीहरु भाग्यशाली छौँ । जो असर हामीले पाएका थियौँ सो अबसर नत हाम्रो पुर्खाले विगतमा पाए नत हाम्रो सन्ताले भविस्यमा पाउने छन् । त्यो केवल एउटा महा सं्रगामको बेला थियो । हामीले पाएका थियौँ । २०५८ सालको संकटकाल पनि मेरोलागि अबसर नै बन्यो । हामीले हरेक समयलाई आफूले सकरात्मक ढंगले उपयोग गर्न सकेमा निकै राम्रो नै हुने रहेछ । २०५८ सालको तत्कालीन शाही सरकारले देशमा संकटकाल लगाएपछि नै हामीलाई झन जनयुद्धमा ढृढ बन्ने वातावरण निर्माण भयो । ति जनयुद्धका भालुबाङ, खारा, हान्निङ, दलसिंगे लगायको मोर्चाहरुमा लडाईका रिपोटिङ गर्दा गर्दै गोलीले नचिनेपछि हाल यो रोल्पा समाचार साप्ताहिकको विभिन्न जिम्मेवारी हुँदै आज हामी १४ औँ वसन्तको सुखद सामचार बाड्न पाएका छाँै । यो पत्रिका सँस्थापक प्रकाशक विपीन कुवर लगायत सबैमा हार्दीक आभार व्यक्त गर्दछु । हाम्रो सामूहिक प्रयासले गर्दा आज हामी सफलताको दिशामा अगाडि बढेका छौँ । हाम्रो वार्षिकोत्सव विविध करणले निर्धारित समयमा गर्न सकेनौँ, हाम्रो अतिथिहरुको कार्य व्यवस्ताले हाम्रो कार्यालय भवनको सम्पन्नालाई पर्खिदा सबैको संयोगले माघ २ गते १४ बजे गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ । यसमा सबैलाई निम्तो छ ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिक रोल्पा जिल्लाको समाचार मूलक पत्रिकाको हिसावले दोस्रो हो भने साप्ताहिक पत्रिका हिसावले पहिलो जेठो पत्रिका हो । रोल्पा जिल्लाको पत्रिका प्रकाशनको इतिहासलाई हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा दर्ता भइ २०६३ साल कात्तिक २२ गते समाचारमूलक पत्रिका रोल्पा आवाज पाक्षिक प्रकाशनमा आयो । यसरी कात्तिक २६ गते नै रोल्पा समाचार साप्ताहिक प्रकाशनमा आएको थियो । रोल्पा जिल्लाका पत्रकार र पत्रकारिताको इतिहासमा २०६० देखि २०७० सम्मको दशकलाई स्वर्ण दशक हो । जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको महान् जनयुद्धले देशको आमूल परिवर्तनको लागि जसरी रोल्पा अग्रगतिमा अगाडि बढेको थियो । पछि राजतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोही शक्ति र संसदवादी दलहरुबीच एकता भएको थियो । सो एकताले राजतन्त्र ढलेको थियो । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि रोल्पाको सञ्चार क्षेत्र शुरुवात भएको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि अलि विकास भएको थियो । जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा अवतरण भएपछि शुरुवात भएको पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमहरूको सञ्चालनले रोल्पाली जनता र रोल्पाको विकासमा निकै लागेका छन् । हाल अहिले रोल्पा जिल्लामा रोल्पा दर्ताका हिसावले रोल्पा रोल्पा आवाज पाक्षिक, रोल्पा समाचार साप्ताहिक, जलजला पोष्ट, जुनकिरी साप्ताहिक, रोल्पा खवर, सनस्टार साप्तहिक, रोल्पा टाइम्स दैनिक, जनआकाक्षा साप्ताहिक, जन्मभूमी साप्ताहिक, जनआकाक्षा साप्ताहिक, सुनछहरी साप्ताहिक र जनअपेक्षा दर्ता भएका छन् । यस्तै रोल्पा जिल्लामा सामुदायिक रेडियो रोल्पा, सामुदायिक रेडियो जलजला, सामुदायिक रेडियो सुनछहरी रेडियो सञ्चालन छन् । तर यतिबेला रोल्पा समाचार साप्ताहिक, जलजला पोष्ट र जन्मभूमि साप्ताहिक, रोल्पा टाइम्पस दैनिक प्रकाशनमा आउन सकेका छैनन् । किन भने रोल्पाको बजार अभाव र सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसैले निकै कठीन छ मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्नका लागि । आफूले एउटा राष्ट्रिय मिडियामा समाचार लेख्न जति कठीनयुक्त छ त्यो भन्दा पनि अझै आफैले व्यवस्थापन गरेर पत्रिका सञ्चालन गर्न मेरो अनुभूतिमा धेरै गुणा चुनौती पूर्ण छ । रोल्पाको यो विकास प्रक्रियालाई रोल्पालीहरुले सुखमय मान्नुपर्दछ । अव यी संचारमाध्यमले रोल्पाली समाज विकासमा कत्तिको योगदान दिन सकेका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ रोल्पाका सरोकारवाला र आम रोल्पाली जनताको जनयद्धले माथि उठाएको राजनीतिक चेतना र एक दशकको बीचमा विकास भएको सामाजिक स्तरले राम्रैसँग देखाएको छ । यसर्थ रोल्पा समाचार साप्ताहिकको प्रकाशनको विकास प्रक्रियालाई हेर्दा २०६६ सालभन्दा अगाडि जसरी सँस्थापकहरूले विकास गराउनुभयो । उहाँहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद छ । अझै २०६६ सालभन्दा पछिको रोल्पा समाचार साप्ताहिकले गरेको विकास प्रक्रियाले पछि रोल्पा जिल्लमा पत्रिका सञ्चालन गर्नेको लहर नै चलेको छ । यस यात्रामा हामी कति टिक्न सक्छौँ वा सक्दैनौ ? यो सम्बन्धित निकायको कुरा भयो । तर हामी सबै टिक्नु पर्दछ भन्ने सबैले समासज परिवर्तनमा हाम्रो लगानी गर्ने हो ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिक १३ वर्ष पुगेर १४ औँ वर्षमा गत २०७६ साल कात्तिक २६ गतेदेखि लागेको थियो । १३ औँ वर्षको उकाली ओराली घुम्तिमोडहरू पार गर्दै अगाडि बढेर १४ वर्षमा पाइला टेकेको थियो । १४ औ वाषिकोत्सवलाई मनाउनको लागि तयारी गर्नु पर्ने हो । दशै र तिहारको अनि हाम्रो नेतृत्वहरुको समय व्यवस्थापनका हिसावले हामीले मिलाउनु पर्ने भयो । अर्काे हामी रोल्पा समाचार साप्ताहिक लगायत अन्य सरोकारवालाको सद्भाव अनि मायाले सकरात्म यतिञ्जेलसम्मा हामी भाडामा आफ्नो सचिवालय, उद्योग, व्यवसायी तथा व्यापार गरिरहेका थियाँै । त्यसलाई ९ नबौ वार्षिकोत्सवको संकलप्प हाम्रो १४ आँै वार्षिकोत्सवको प्रतिवद्धता अब हामी आफ्नै भवनमा हुनेछाँै भनेका थियाँै । त्यसै अनुसार काम गरेका थियौँ । आफ्नै भवन निर्माण गर्नका लागि हामी सबैको सामूहिक प्रतिवद्धता र कार्यक्षमताको एकताले सकेका थियौँ । त्यतिबेला सो भवनको पनि कार्य सम्पन्न भइ सकेको थिएनन । अब हामी र रोल्पा समाचार साप्ताहिककाको वार्षिकोत्सवलाई तिथि मितिका हिसावलेभन्दा पनि कसरी नयाँ गराउन सकिन्छ भन्ने मै हामीले सोचेका थियाँै र वर्तमानमा र भविस्यमा पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिकले विगतदेखि नै कार्यक्रमलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ । रोल्पा समाचार साप्ताहिकले उठाएका सामजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मुद्धाहरु त वर्तमानसम्म निरन्तर उठाएकै छौँ । यसले वर्षभरी गरेका काम कार्यलाई सबैको माझमा अगाडि प्रस्तुत गर्दै आएको छ । रोल्पा समचार साप्ताहिककले २०६७ सालदेखि रोल्पा समाचार साप्ताहिकको वार्षिकोत्सवलाई नयाँ आयमिक तरिकाले मनाउँदै आइरहेका कुरा सबैलाई अवगत नै छ । रोल्पामा रोल्पा समाचारको बार्षिकत्सवको बाहेक अन्य समयमा प्रेस काउन्सिलको उपस्थिति रोल्पामा भएको छैन । तर २०६८ सालमा रोल्पा समाचार साप्ताहिकको वार्षिकोत्सवमा पहिलो पटक प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षहरूको इतिहासमा नारायण शर्मालाई पहिलो पटक रोल्पा लिन सफल भएको थियाँै । २०७० सालको सातौं वार्षिकोत्सवमा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य, तत्कालीन उपसभामुख ओनसरी घर्तीमगर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लगायतलाई आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सरिक बनाएको थियो । २०७१ सालमा नवौं वार्षिकोत्सवमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यसले रोल्पा समाचार साप्ताहिकको इतिहासमा नयाँ आयाम थप्दै गएको छ । प्रचारात्मक तथा सन्देशनात्मक हिसावले निकै उचाईमा पुगेको थियो ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिकको १३ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई पनि भव्य रूपले मनाउनको लागि कार्यक्रमको तय गरेका थियौँ । पछिल्लो चरणको राजनीतिक समिकरण अनुसार रोल्पा जिल्ला जिल्लाबाट जनयुद्धका सफल फौजी कमाण्डर नन्दकिशोर (नन्दबहादुर) पुनमगर ‘पासाङ’ सम्माननीय उपराष्ट्रपति र रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट २०७० साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाषद् ओनसरी घर्ती घर्तीमगर सम्माननीय सभामुखको बनेपछि, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गर्ने योजना अनुरूप हामीले आफ्ना तयारी गरेका थियौँ । हामीले रोल्पा समाचार साप्ताहिकको वार्षिकोत्सवलाई नयाँ ढंगले मनाउँदैछाँै ।
हाम्रो १३ वर्षका अन्तरालमा धेरैका पसिना वगेको छ । रोल्पाका राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि हाम्रो विकासमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ । साथै रोल्पा जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी सँस्थाहरु, विभिन्न सामाजिक संघ सस्था, विद्यालयक्षेत्र, यातायात क्षेत्र लगायको सहयोगबाट हामी अगाडि बढेका छाँै । तसथै यस वर्षको पनि वार्षिकोत्सवलाई नयाँ र फलदायी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निकै गम्भिर ढंगले लागेका छौँ ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिकको वार्षिकोत्वले रोल्पा समाचार साप्ताहिक र काठमाण्डौमा रहेको प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायत व्यक्तिहरुको सम्बन्धलाई नविकरण र नियमितता प्रदान गर्दै जीवन्त राखिरहेको छ । यस पटक अझै प्रेस काउनिसल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कर्की विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ ज्यूको रोल्पाका आगमन नयाँ हो । जसले रोल्पाका प्राय गाउँ बस्तीहरुमा घुम्दै जनयुद्धकालीन समयमा युद्धपत्रकारीता गर्नुभयो जो खिलबहादुर भण्डारीले उहाँ पनि रोल्पा आउनुभयो । यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष क्रान्तिकारी पत्रकार संघ रोल्पाका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य जो हाम्रो पेशागतसाथमा व्यक्तिगत रुपमा पनि गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको आगमनले रोल्पाली पनि खुसी नभएका होइनौँ । अर्काे हाम्रो वार्षिकोत्सवमा समारोहमा आएको टोली जिल्लाको २८ औँ खुला दिसामुक्त एवं २१ साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने ऐतिहासिक कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गराएपछि उहाँहरु अझै खुखी हुनुभयो । रोल्पाली जनताको उत्साह हेरेपछि खुसी हुनुभयो । त्यसरी हाम्रा पाहुनाहरु आफ्नो यात्रातिर लाग्नुभयो ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिक जसरी २०६३ साल कात्तिक २६ गते प्रकाशित भएको थियो । यति बेला रोल्पा समाचार साप्ताहिक १३ वर्ष पूरा भएर १४ आँै वसन्तमा पाइला टेकेको छ । रोल्पा जिल्लाको समाचार साप्ताहिक पहिलो पत्रिका र रोल्पा जिल्लाको गुरु पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित रोल्पा समाचार साप्ताहिकको यात्रा १३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । एक दशक ४ वर्षको यात्रा निकै लामो नै थियो तर पनि आज सम्झिदाँ कति छोटो भएको जस्तो लागेको छ । कम जिम्मेवारी भन्दा करिव १० वर्षको यात्रा आफैले सबै टिमलाई कलमको युद्ध मैदानमा होमेर जादाँको अनुभवन अझै स्पाटिलो र खादिँलो बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा केही इतिहास र वर्तमानलाई लेख्नु जमर्काे गरिएको छ ।
मेरो र रोल्पा समाचार सँगन समन्ध
मेरो पत्रकारितातिरको अभिरुची कलिलै उमेरमा थियो । मनको भावना अविब्यक्त गर्ने साहित्यक विधाबाट अगाडि बढेता पनि पत्रकारिता पेशा गर्ने नै जीवनको उद्देश्य थियो । त्यही पत्रकारिता र साहित्य लेखनबाट अगाडि बढ्ने जमर्काे गरिरहेको थिए । मेरो बाल्यकालदेखिको अठोटलाई थोरै भए पनि जनयुद्धको बेलामा शुरुवाट गर्ने अबसर पाएँ । नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको आन्दोलनबाट म पनि अछुत रहन सकेन । बम र बारुदको धुवासँगै–सँगै युद्धको मैदानमा तत्कालीन जनमुक्ति सेना, माओावादी र स्थानीय जनताले गरेको प्रयासलाई सञ्चार माध्यमबाट उजागर गदैँ मेरो भूमिका निर्वाह गरेको थिए । करिव २०५८ सालदेखि शुरु भएको युद्ध पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै युद्धको समयमा माओवादी आधार इलाकामा प्रकाशित भएका समाचार पत्रहरुमा लेख्न थालियो । तल्कालीन सामराज्यवाद, विस्तारवाद र घरेलु सामन्तवादको सूचना संयन्त्रसँग मुकाबेला गर्नका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले क्रान्तिकै मोर्चाबाट क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको समूह तयार गर्ने अबधारण लिएको थियो । त्यसैमा आवद्ध हुदैँ जनादेश साप्ताहिक, नौलो जनउभार साप्ताहिक लगाएत अन्य पत्रिकाहरुमाका गर्दै जानेक्रममा २०६० सालमा रेडियो गणतन्त्र शिषेश क्षेत्रमा काम गर्दै अगाडि बढियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात दलको सहकार्यमा निरंकुश राजतन्त्रलाई राजगद्धीबाट हटाउनका लागि जसरी आन्दोलन गरेको थियो । जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ सम्पन्नपछि माओवादी पनि आफ्ना कायनीति शान्ति र संविधान लगाएतका विषयलाई प्राथमिकता दिदैँ शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो । जसरी ३०६३ साल देखि शान्ति प्रक्रियासँगै रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा प्रवेश गरेको थिए तबदेखि नै युद्धपत्रकारिताको जगबाट शान्तिकालीन पत्रकारिताको यात्रा पनि शुरु भएको थियो ।
रोल्पाको लिबाङमा प्रवेशसंगै मैले पत्रकारिता पेशालाई फराकिलो घेराबाट अगाडि बढाउने सोंच अनुसार काम गरें । मैले शान्तिकालीन प्रक्रियासंगै दाङबाट प्रकाशित गरिएको नौलो उभार साप्ताहिक, काठमाण्डौँबाट प्रकाशित हुने जनादेश साप्ताहिक, जनदिशा दैनिक, रेडियो गणतन्त्र राप्ती, रेडियो पश्मिाञ्चल पाल्पा, रेडियो मिरमिरे काठमाण्डौँ लेखनको काम गर्दा गर्दै लिबाङमा पत्रकारको हैसियतले परिचित हुन थालियो । त्यस पछि मैले रोल्पा आवाज र रोल्पा समाचार साप्ताहिकको समाचार लेखन तथा साहित्य लेखन गर्दा गर्दै रोल्पा समाचारमा २०६४ साल पौष ८ गतेबाट समाचारदातामा काम गर्ने अबसर पाएं । मलाई त्यो अवसर सँस्थापक प्रकाशक विपीन कुवँर र सम्पादक प्रकाश कुमार गिरी, प्रवन्धक नरबहादुर महराले प्रदान गर्नु भयो । खोजी समाचार र अन्य साथीहरुको समय नमिल्दा पनि मैले लेखेका समाचारहरु पत्रिको पहिलो पेजमा नै छापिनले हुनाले मलाई रोल्पा समाचारबाट स्थापित हुन सहज भयो । लेखन गर्दै अगाडि बढ्ने काम गरें । निरन्तरको समाचार लेखनले सबैसँगको सहकार्य र सद्भावपूर्ण व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने नै मेरो त्यतिबेलाको चिन्तन थियो । मेरो कार्य कुशलता र लगनसीलतले गर्दा अगाडि बक्रिममा २०६५ साल पौषसम्म समाचारदाताको रुपमा काम गरियो । मेरो लगनसीलतालाई प्रकाशन मण्डले राम्रै मुल्याङ्कन गरि २०६५ माघबाट आर्थिक योजनालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि विज्ञापन शाखा प्रमुख पदको जिम्मा दिने निर्णय गरियो । विज्ञापन प्रमुखको जिम्मा बहन गर्दा खेरि धेरै स्थानमा अनेक कुराहरुको सामना गर्दै अगाडि बढियो । मलाई त्यतिबेला केही गर्नकालागि केही दुख पाउनु पर्दछ । कठिनतामा पनि वाँच्न सिक्नु पर्दछ । जो हामीले परिश्रम नगरि जीनवको हरेक मोडमा सफल हुन सकिदैन । सफल हुनका लागि आफ्नो मात्रै भूमिकाले पनि सम्भवन हुदँैन । त्यो त सबैको सहयोगबाट अगाडि बढ्ने अबसरा पाउँछ । त्यसैले मैले जति कडा मेहनगरि त्यसको त्यस अनुसार मलाई जिम्माको भारि पनि दिदैँ जानु भयो । आफूले परिश्रम गरिरहेको पत्रिका भएकोले गर्दा पत्रिकालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सबैसँग मनथन गर्न थाले । समाचार लेखन र आर्थिक योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मा दिइयो । आर्थिक योजनालाई पनि व्यवस्थित गर्ने कामलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा पारेँ । आर्थिक योजना विना नै पत्रिका सञ्चालन गर्ने त्यो दिगोपना नहुने भएकोले गर्दा आर्थिक योजना अन्तर्गत प्रेस काउनसिल नेपालमा मुल्याङ्नकको लागि दर्ता गरियो । एक कार्यालय एक विज्ञापनको नीति अख्यियार गरियो । त्यसले पत्रिकालाई विस्तारै व्यवस्थित बनाउँदैँ लग्ने काम भयो । त्यतिबेला कतिपय सन्दर्भमा आर्थिक अभाव भएर सडकमा अलपत्र परेर माग्न गएको जस्तो बुझाईबाट कुरा गर्दथ्ये । त्यतिवेलामा चित्त दुख्ने गर्दथ्यो । तर, पनि पेशाले गर्दा त्यस्तो विचारलाई पनि सहदैँ पेशाप्रति मर्यादित र लगनसील बन्ने थप प्रेरणा पाए । मलाई त्यतिबेला एउटै सपना थियो। म कुनै भिखारी होइन । मलाई त्यसरि बुझे पनि उनीहरुको अज्ञानताले कहिल्यै थकित बोल्नु भएको हो । त्यो अज्ञानतालाई मैले गरेको कामबाट विस्तारै पुष्टि गर्दै जानेछु भनेर दिनरात परिश्रम गरिरहेँ । जसको एकवर्षको मेहनतको फल आर्थिक हिसावले भन्दा पनि पत्रिकाको सबै योजना तर्जुमा गर्नका लागि । ब समाचार लेखन र योजना निर्माण गर्दै पत्रिकालाई सक्रिय बनाउदैँ लगेपनि २०६६ साउन २७ देखि प्रवन्धकको जिम्मा बहन गर्ने आधारभूमि तयार भयो । विज्ञापन शाखा प्रमुख हुदाँ मलाई आर्थिक योजना बनाउने र विज्ञापनमात्रै लिने जिम्मा थियो । त्यसले मात्रै पत्रिकालाई माथि उठाउनका लागि कुनै पनि सहज सफल हुन नससिने भएकोले गर्दा आर्थिक र अन्य निकायसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने भयो । मैले जति सकिन्छ सम्बन्ध विस्तार गर्ने जमर्काे गरेँ । मैले त्यतिबेला करिव ३ महिना जति प्रकाशन नियमित हुन नसकेको अबस्थामा नियमित बनाउने प्रयास गरियो । त्यसैले पत्रिकामा काम गर्ने सँस्थापकहरुको कार्य व्यस्तताले गर्दा नै सम्पूर्ण जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्ने भयो । पत्रिकाको करिव तीन वर्षको लेखा परिक्षण, आन्तरिक राज्ज्वस्व कार्यालयमा दर्ता, सूचना विभागबाट बर्गिकृत साप्ताहिक बनाउन सफल लगायतका कामहरु कार्यकालमा निर्वाह गरियो । प्रवन्धक भन्दा अगाडि साघुरो घेरामा भूमिका निर्वाह गरेको फराकिलो घेरामा अगाडि बढ्ने काम भयो । प्रबन्धक भए पनि भूमिका निर्वाहका हिसावको हिसाबले सबै गर्नु पर्ने भयो । पत्रिकाका सस्थापक प्रकाशक विपीन कुवँर जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि, आफैले सबैले गर्नु पर्दाको पीडाले गर्दा मैले पत्रिकाको प्रकाशकको जिम्मा लिनु पर्ने, वा पत्रिका बन्द गर्नु पर्ने अबस्था भएको थियो । त्यसकारण आधारमा २०६७ असोज १९ गते बसेको पत्रिकाको बैठकले प्रकाशकको जिम्मा दिने निर्णय गरियो । पत्रिकाको प्रकाशकको जिम्मेबारी दिने सकरात्मक निर्णयले गर्दा अझै पत्रिकाप्रतिको दायित्व बढ्यो । पत्रिकाप्रतिको निरन्तर लगाव र पत्रकारिता पेशामा सक्रिताले पत्रिकालाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने योजनाका खाँका निर्माण गरियो ।
यो मेरो जीवनको २०६४ साल पौषदेखि हाल करिव १२ आँै वसन्तका अनुभूतिहरुलाई सश्लेषितरुपमा राख्दा कतिपय धेरै विषयहरु छुट्न सक्छन् । काम गर्दै जादाँ आज जस्तो लाग्छ पहिलो समाचार लेखकको तर पनि समयको चक्र भने चार वर्ष वितिसकेको छ । पत्रकारिता पेशामा एक श्रमजिवी पत्रकार बनि काम गरेको तर पछि आफै पत्रकार र आफै सञ्चालक भन्दाको पीडा भने निकै फरक पाएको छ । कतै छैन्, यो जीन्दगीका भारी विसाउने विसौनी, कोही छैन मेरा अन्तर आत्मको कथा बुझिदिने तर, मेरो पेशा हो मनभरि वेदनाको पोको बोकेर फेरी पेशामा दत्त चित्त भई लाग्नु पर्ने हो, पत्रकारको पेशा । तर, सबैको सहयोगबाट केही कामहरु भने गर्न सकिएको छ । दुर्गम तथा राज्यबाट पछाडि पारिएको यस रोल्पा जिल्लाबाट पत्रिका प्रकाशनलाई निरन्तरता दिन पनि कम जोखिम र चुनौती छैन ? प्रकाशकको जिम्मा लिएपछि भएका केही काम कार्यकार्यलाई केही बुदागतरुपमा उल्लेख गर्दछु । कुनै पनि व्यक्तिले देखेको सपना अलि मुर्त हुन सक्दैन, सबैले देखेको सामुहिक सपनाले मात्रै सँस्थालाई नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सबैको सहयोगी आत्मालाई एकीकृत गर्दै पत्रिकालाई केही विकास गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढियो । रोल्पा जिल्लाबाट प्रकाशित एक मात्र समाचार मूलुक पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिलमा दर्ता, आयकरमा दर्ता, वेवसाइड सञ्चालन रोल्पा अफसेट प्रेस सञ्चालन भएको छ । यीनै हाम्रो प्रयासले पत्रिकालाई नयाँ धरातलमा उठाउनका लागि आधार स्तम्भ भएका छन् ।
प्रेस काउन्सिलमा दर्ता एवं मुल्याङ्कन
रोल्पा जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता गर्ने शुरुवाटमा निकै समस्या भयो । अर्थिक वर्ष २०६४÷२०६५ मुल्याङ्कनको दर्ता गर्ने म्याद सकेको थियो । रोल्पाबाट एक मात्र पत्रिका र नयाँ गणतन्त्रको पहिलो अभ्यासमै रोल्पालाई विशिष्टतामा हेरि समय सकिए पनि एउटा निवेदन र केही दर्तामा आवश्यक काजगात पेश गरियो । राती १४ बजेसम्म विवीन कुवँर र मैले राती अबेरसम्म बसेर प्रेस कान्सिल नेपालमा पठायौँ । गोविन्द आचार्य, काउन्सिलका प्रकाशन शाखाका जगदिस पौडेलले सहयोग गरिदिनुभयो । काउन्सिलमा पत्रकार महासंघकाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने पत्रकार महासंघ नेपालको गोविन्द आचार्यले निकै लागि पर्नुभयो । पहिलो पटक रोल्पाबाट प्रकाशित भएको पत्रिकालाई सूचना विभागबाट “ग” वर्गमा पहिलो पटक वर्गिकरणमा परेको थियो । सो वर्गिकरणमा परेपछि हामीलाई वेवसाईड हेर्नका लागि हतार भयो । हामीले हेर्दा (ग) वर्गमा परेको देख्दा निकै खुसी लाग्यो । हामीले २०६६ साल माघदेखि अनुदान पायौँ त्यसपछि प्रकाशनमा अलि सहज भयो । पछिल्लो चरणमा प्रेश काउनसिल नेपालको अध्यक्षमा नारायण शर्मा भएपछि मोफसलका पत्रिकाहरुलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित अर्थिक वर्ष २०६५÷२०६६ मा “ख” वर्गमा, अर्थिक वर्ष २०६६÷२०६७ मा ख वर्गमा परेको छ । अर्थिक वर्ष २०६७÷२०६८ देखि हालसम्म ‘क’ वर्गमा पर्दै आएको छ । हाल रोल्पा जिल्लामा अन्य पत्रिका पनि सञ्चालन भएकाले साइज, सामाग्र र वितरण प्रमाणलीमा सालाखाला नै देखि भएकाले सबैलाई ख वर्गमा राखेसँगै हामी पत्रिकालाई आर्थिक तथा नैतिक समर्थन निरन्तर भई रहेको छ । यस्तै सहयोग आगामी दिनमा रह्यो भने हामीलाई पत्रिका प्रकाशन गर्नका लागि निकै सहज हुने छ । यस पत्रिकाको निरन्तरताले मात्रै रोल्पाली नागरिकको भावना मुखरित गर्न सकिन्छ ।
आयकरमा दर्ता पक्रिया ः रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिकलाई आर्थिक रुपमा व्यस्थित र लेखा प्रणालीबाट काम गर्नका लागि आन्तरिक राज्वस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा दर्ता गर्ने योजना बनाईयो । आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि मासिक आय व्यय विवतरणलाई सँस्थागत गर्नका नै सो कार्य गरियो । २०६३ साल देखिको २०६६ सालसम्म तीन वर्षसम्मकोे लेखा परिक्षण नगरिएको थिएन । हामीलाई प्रेश काउन्सिल नेपालमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने, राज्ज्वस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने थियो । पेश गर्नु पर्ने समय नजिकै आई सक्दा पनि प्रतिवेदनको तयारी गर्न ढिलो भएपछि लेखापाल बालकृष्ण आचार्यले धेरै सहयोग गर्नुभयो । राति अबेरसम्म बसेर प्रतिवेदन तयार गरिदिनु भयो । लेखा व्यस्थित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ । उहाँको भूमिकालाई हामी कहिल्यै विर्षन सक्दैनौँ । तर, त्यतिबेलामा प्रतिवेदनको लागि साप्ताहिकको सञ्चालन भएपछि दर्ता नगरेकोले आर्थिक ऐन अनुसारको जरिमानाका साथमा २०६७ साल भाद्र २८ गते दर्ता गरियो । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४, आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५, आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६, आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७, एकमुष्त बुझाई काम कार्यलाई व्यस्थित गर्ने प्रयास गरियो । साथै आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को पनि लेखा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । अझै सबै सञ्चार माध्यमहरुलाई मूल्य अभिबृद्धी कर (भ्याट) मा दर्ता गराउने सरकारको नीति अनुसार २०६८ पौस ९ गतेदेखि भ्याटमा दर्ता भएको छ । यसले सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुसँगको सहकार्यलाई अझै नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुको साथै अन्य कारोबार गर्नका लागि सहजता पैदा गरेको छ । जो हाल व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग पुगेको छ । यसले रोल्पा समाचारलाई लेखाको हिसावले व्यवस्थित बनाएको छ । आगामी दिनमा अझै नयाँ दिशा अगाडि बढेको छ । हाल हामी सबै स्थानीयतह र गाउँपालिकाहरुमा काम गर्नका लागि निकै सहज भएको छ । हाम्रो सबै सहयोगी एवं साझेदारी निकायहरु नै हाम्रो सहयात्री बनेका छन् । हाम्रो हरेक कदममा जरुरी इट्टा थपिएको छ ।
ध्भदकष्मभ सञ्चालनको पक्रिया ः विश्व २१ औँ शताब्दीको सूचना र सञ्चारको युगमा छ । सूचना सञ्चारका प्रविधिले विश्वलाई एउटा प्रविधीभित्र सिमित गरेको छ । हाम्रो दुर्गम जिल्ला र जनयुद्धको उद्गम स्थलको नयाँ इतिहास कोर्न सफल यस जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रिकालाई वेवसाइड सञ्चालन गर्नका लागि धेरै पाठकहरुबाट पतिक्रिया आएपछि हामीले वेव साइड दर्ता र डिजायनका लागि रामकुमार बुढामगरलाई जिम्मा दिइयो । जसको लागि रोल्पा समाचारलाई २०६७ साल मंसिरबाट नै हामीले (धधध।चयउिब।अयm।लउ) सञ्चालन गरिएको छ । वेवसाईडमा जोडिए पनि हाम्रो सामग्रीहरु लेखक र पाठक हरुले हेर्न सक्ने भएपछि सामग्रीमा नियमति भएको छ । हामीलाई वेवसाइड सञ्चालनले नयाँ उचाईमा पुर्याएको छ । यसको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीले निकै मेहन गर्नु पर्दछ । आगामी दिनमा सबैको सहकार्यबाट अनलाईन सेवालाई सहज र नियमित बनाउनका लागि प्रयास गर्नेछाँै । हामी हाल विश्वको जुन सुकै कुनाबाट हेर्न सक्ने भएका छाँै । हाम्रा अनलाई पाठकहरुको सख्या दिनप्रति दिन वृद्धी हुदैँ गईरहेको छ । हाम्रो कामको चाप, टेलिफोन सेवाको सहज सुविधा नहुदाँ केही समस्या भएको छ । तर, यसको परिमार्जनको लागि अगाडि बढ्ने दृढता भने गरेका छाँै । यो प्रक्रियामा थप केही समस्या आएको छ । सञ्चारमन्त्रालयसँग र अन्य सरोकार निकायसँग सहकार्य गरी अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । हामीले हाम्रो सामग्रीहरुलाई अनलाईनमा राखेपछि अनलाईन श्रोताहरु बढेका छन् । त्यसले पनि हामीलाई अझै बलियो बनाएको छ । पाठकहरुको मायाँममता पाएका छाँै । त्यसलाई अब हामी नयाँ ढंगबाट चलाउने योजनामा छौँ ।
रोल्पा अफसेट प्रेश खरिदबारे एक चर्चा ।
यस साप्ताहिक प्रकाशनको सहमति हिमालय अफसेट प्रेसले दिएको थियो । प्रकाशन २०६३ साल कात्तिकदेखि भगिरथ मेहनत गरेको थियो । प्रकाशन गर्नका लागि प्रेसले खेलेको भूमिका अहम रहेको छ । अफसेट प्रेस आफ्नो सामित्वमा नहुदाँ आफ्नो योजना अनुसार चलाउनका लागि केही समस्या भए पनि पत्रिकाको महत्व बुझेर प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । अफसेट अति आवश्यक भए पनि आफ्नो कुनै स्रोत नभएकोले स्रोतको खोजी गर्ने कामलाई अगाडि बढाईको थियो । खोजी गर्ने क्रमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा आर्थिक प्रस्ताव २०६७ साल पेश गरिएको थियो । प्रेस काउन्सिलको नेपालको २०६८ साल जेठ ८ गतेको सैद्धान्तिक सहमति अनुसार काम गरियो । सहमति गरिदिएको प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा,गोविन्द आचार्य, किरण श्रेष्ठ, जगदिश प्रसाद पौडेल लगाएतलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दुछ । उहाँकोहरुको नैतिक सहयोग विना हाम्रो प्रेसको सपना जाग्दैन थियो होला । कृषि विकास बैंक कार्यालय रोल्पाका प्रवन्धक दुर्गाप्रसाद चौधरीको सक्रियतामा कर्जा प्रदान गर्न सकिने भए पनि हामीसँग धिटोको लागि कुनै बस्तु नै थिएन । त्यसैले म आफैले नगद मुद्धतिमा जम्मा गरि सोही रकमको ९० प्रतिशत रकम ऋण निकाल्न पाईने भएकोले गर्दा सो विधि अपनाईयो । सो मुद्धति खातामा जम्मा गर्नका लागि पनि करिव १६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्दथ्यो । तर, त्यो १६ लाख हामी मोफसलमा पत्रिका सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरुसँग हुने कुरै भएन ।तसर्थ मैले हाम्रो पत्रिकाका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका एकीकृतन नेकपा (माओवादी) का केन्दीय सदस्य दिपेन्द्र पुन सिजलसँग योजनाका बारेमा छलफल गरियो । उहाँसँगको छलफल पत्रिकाका बरिष्ठ सल्लाहकार खेम बुढामगर, गैर सरकारी सँस्था महासंघ नेपाल रोल्पा शाखाको अध्यक्ष शोभाराम डाँगी र कोर्चाबाङ १ का दलसुर बिक, लेखक एवं पत्रिकाका सहयोगी गौरि किरण डाँगी लगायत अन्य संघ–सस्था र व्यक्तिहरुसँग निकै छलफल भयो । सहयोग गर्न सकिने बचन बद्धता दिनुभयो । मलाई भारि हलुका भए जस्तो भयो । १६ लाख जम्मा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा कठिन थियो । तर, सहयोगी निकायको साझेदारीमा जम्मा गर्ने योजना बनाइयो । जस्तो समस्यालाई पनि योजनाले हल गर्दछ । पहिले हामीले १३ लाख रुपैया मात्र जम्मा गरियो । त्यो १३ लाख रुपैया बोकेर कृषि विकास बैंक कार्यालय रोल्पा, जिल्ला प्रशासन गर्दा साँझको ७ बजिसकेको थियो । खाता सञ्चालनका लागि कागजात मिलाउँदै जाने शर्तमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद वास्तोला, कृर्षि विकास बैंक रोल्पाका प्रवन्धक दुर्गाप्रसाद चौधरी, ए. माओवादीका के.स. दिपेन्द्र पुन ‘सिजल’ लुङ्ग्री माडी सहकारी सँस्था लिमिटेड रोल्पा, दलसुर विक, श्रष्टी पोलिक्लिनिक रोल्पाका तारादेवि डाँगी, रविन्द्र फोटो स्टुडियोका दिलमायाँ डाँगी, स्काई कम्प्युटरका दिपेन्द्र वाठाँमगर, ज्ञानबहादुर वली, अर्जुन डिसी, केशव कुमार आचार्य लगायत अन्य सहयोगी व्यक्ति एवं सस्थाहरुको सहयोगमा काम गरियो । अर्काे मितिमा फेरि ६ लाख विभिन्न संघ–सँस्था व्यक्तिको सहयोगमा जम्मा गरियो । त्यही १६ लाखबाट १४ लाख ४० हजार ऋण लिएर अफसेट खरिद पक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यसको बलमा म काठमाण्डौँ हिडे काठमाण्डौँमा “पुनित बि इन्टर नेश्नलसँग अफसेट खरिदका लागि सम्झौता २०६८ जेठ २२ गते एक महिनाभित्र प्रेश भन्सार कार्यालयमा आउने गरि काम सम्झौता गरियो । अन्तिममा मंसिर ८ गतेसम्म लिई सक्नु पर्ने थियो । अफसेट प्रेस सुनौली भन्सारमा आई सकेपछि कम्पनीबाट खबर भयो । मैले सो अफसेट प्रेसलाई रोल्पा लिनका लागि सुनौली गईपुग्नु पर्ने भयो । रांकोटी दुवानी सेवाको साधन लगेर सुनौलीमा गइयो । विधिध समस्याका बाफजुत पनि रोल्पामा लिइयो । नेपालको एक मात्र अफसेट प्राविधिक राम तामाङ आई जडान गरिदिनु भयो । हामीले सञ्चालन गरेका छौँ । हाल अफसेट आफ्नै अफसेटबाट प्रकाशन गर्न निकै सहज भएको छ । यसको दीगोपना र व्यवस्थितका लागि हामी सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछाँै । मलाई आफ्नै अफसेट प्रेस आउँछ र ? मनको सपना पूरा गराउनका लागि निकै कठिनतासँग खेले जो मेरो खेलाईमा सबैको सहयोग रहेको थियो । सहयोगमा रोल्पामा अनलोड खुत्ता च्यापेर विरामी समेत भईयो । तर, अफेट प्रेस जडान गरि सञ्चालनमा लिए पनि केही सहजता भएको छ । रोल्पा जिल्लामा २०६३ साल कात्तिक १७ गते दर्ता भएको २६ गते पहिलो अंक प्रकाशित भएको थियो ।
यतिबेला प्रेश काउन्सिल नेपाका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रेस सेनानी नारायाण प्रशाद शर्मा, पूर्व उप्रधान तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमगर, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, पत्रकार गोविन्द आचार्य, सचिन रोका, हिरामणी दुःखी, चेतलाल कुवर, मनोज घर्तीमगर, एवं यस पत्रिकाका प्रकाशन तथा यहाँसम्म आउनका लागि योगदान दिनु हुने सँस्थापक प्रकाशक विपीन कुवंर, प्रधान सम्पादक प्रकाश कुमार गिरी, सस्थापक सम्पादक प्रवेश आचार्य, सस्थापक कार्यकारी सम्पादक रविन्द्र पौडेल, सँस्थापक व्यवस्थापक ओम केसी, नन्दलाल कुवंर, स्थापक प्रमुख समाचारदाता डिल्लीराज न्यौपाने, स्थापक सल्लाकारहरु नारायण आचार्य, डी.बी. टुहरो, स्व.इन्द्र यात्री, पत्रकार एवं वरिष्ठ सल्लाकार खेम बुढामगर, हिमालय अफसेट प्रेस, प्रवन्धक नरबहादुर महरा, सह–सम्पादक धनीराम शर्मा, कार्यकारी सम्पादक यज्ञश्वर वली, कार्यालय व्यवस्थापनका जुना बुढामगर, चन्द्र कला बुढामगर, दिपा पुनमगर, बब्ली गुरुङ, लेखक तथा स्तम्भकारहरु खेमराज शर्मा, हस्तबहादुर केसी, राजकुमार कक्षपति, श्यामकुमार बुढामगर, स्व. गौरीकिरण डाँगी, आशबहादुर पुनमगर, चन्द्र जिएम, बलबहादुर घर्तीमगर, हरिसरा घर्तीमगर, सुर्दशन मंगोल, माधव प्रसाद आचार्य, ओम प्रकाश बिक, पुरण क्षेत्री, हरिसरा घर्तीमगर, आर्थिक तथा नैतिक रुपमा सहयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, जिविस रोल्पा, जिल्लाको राजनीतिक दलका प्रमुख तथा सबै राजनीतिज्ञ, पत्रकार महासंघ रोल्पाका सँस्थापक अध्यक्ष काँशीराम डाँगी, नि.वर्तमान अध्यक्ष मौसम रोका, समाचारको क्षेत्रबाट योगदान पु¥यानु हुने रेडियो जलजला, रेडियो रोल्पा हाम्रा समाचारदाता, विज्ञापनदाता, लेखक, पाठक लगाएत सम्पूर्णको सहयोगले वर्तमानको यात्रामा पत्रिकाले केही विकास गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनका लागि यसको प्रगति, समृद्धीकोलागि आगामी दिनमा अझै सबैको कलमहरु, सबैको आत्महरु नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनका लागि १४ औं वार्षिक उत्सवको अबसरमा हार्दिक मंगलयम शुभका ब्यक्त गर्दुछ ।
रोल्पा सामाचार साप्ताहिकको विगतको कठीनयुक्त दिनबाट आजको अवस्थामा आएको छ । रोल्पा समाचार साप्ताकिको एउटा सानो कोठाबाट हामी फराकिलो घेरामा आएका छौँ । हाम्रो साचार साप्ताहिक नियमित रुपमा प्रकाशित भइरहेको छ । यस समाचार साप्ताहिका प्रतक्ष्य रुपमा करिव ९ जना जोडिएका छौँ । हामी परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता तिर उन्नमुख भएका छौँ । यो प्रकाशकको मात्रै भूमिका होइन यो त रोल्पा समाचार साप्ताहिकमा जोडिएका दिन, रात विदा, चाड, पर्वको कुनै प्रवाह नगरी काम गर्ने मेरा कर्मचारी साथीहरुको अथक पसिना खर्चिको छ । यसमा म सलाम गर्दछु । रोल्पा जिल्लाको समग्र विकासमा कति योगदान पु¥याएको छ भन्ने कुरा अब हाम्रो १३ वसन्तको समीक्षा यस जिल्लाका सरोकारवाला निकायको हो । तर, हामी यति भन्न सक्छौँ । हामी जति अगाडि बढीरहेका छौँ त्यति हाम्रा महासमरका यात्रा गहिराइमा पुग्दैछन् । हाम्रा चुनौतीहरु निकै नयाँ आधुनिक शैलीबाट उपस्थिति भएका छन् । यो सानो स्थानमा पत्रिको बजारको अभाव छ । पाठक अब श्रव्य दृश्य तिर अगाडि बढेका छन् । साथै पत्रिकाको भिड पनि अन्य पेशामा असफल भएर अंगालेको टिप्पनी पनि नभएका होइनन् । यसलाई हामीले प्रतिवाद गर्नुभन्दा हाम्रो व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक विचारको विकास उच्चतम भएको बेलामा हामी सबैको साझा बन्नु पर्दछ त्यो पनि निकै चुनौती रहेको छ । हामी रोल्पा समाचार साप्ताहिले रोल्पा जिल्लाको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, साँस्कृतिक, विकास निर्माण, साहित्य लगायतको क्षेत्रमा धेरै योगदान पु¥याएको दावी छ । यो यात्रामा साथ दिने सबैलाई १३ वर्ष पूराभइ १४ वर्षमा पाइला टेकेको अबसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अगाडि बढ्न सबैको साथ पाउने आशा समेत व्यक्त गर्दछाँै ।
१४ आँै वार्षिकोत्सवको तयारी
रोल्पा समाचार साप्ताहिकको १४ आँै वार्षिकोत्सव तथा रोल्पा समाचार साप्ताहिकको भवन उद्घाटन कार्यक्रम माघ २ गते हुने गरिने छ । रोल्पा समाचार साप्ताहिकको १४ आँै वार्षिकोत्सव कात्तिक २३ गते मनाउने तयारी गरे पनि चाडपर्व तथा अथितिहरुको समय अनुकुल नभएको र रोल्पा समाचार साप्ताहिकको कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न नभएकोले गर्दा केही समय पछि कार्यक्रम गरी मनाउने समाचार परिवारले निर्णय गरेको थियो ।
समाचार साप्ताहिकको १४ आँै अवसरमा ‘पुरुस्कार वितरण तथा सम्मान एवं रोल्पा समाचार साप्ताहिको भवन उद्घाटन’ समारोह संघीय सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री माननीय वर्षमान पुनमगर ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, संघीय प्रतिनिधी सभा सदस्य एवं पूर्व सभामुख ओसरी घर्तीमगर, प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद के.सी., प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनमगर, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका का.वा. अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ लगायतका विशिष्ट, व्यक्तिहरुको आतिथ्यतामा सम्पन्नताका लागि भव्य तयारी गरिरहेका छाँै ।
रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिको पत्रिकाको १४ औं वार्षिक उत्सव सम्पन्नका लागि आज बैठक सम्पन्न भएको छ । वार्षिकोत्सवको तयारीको सन्दर्भमा शुक्रबार समाचारका प्रकाशक÷सम्पादक मानसिंह विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले २०७६ साल माघ महिनाको २ गते बिहिबार नव निर्मित भवनको प्राङ्गनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । बैठकले जनप्रतिनिधी, स्थानीयतहका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, संघ सस्थाका प्रमुख, सञ्चारकर्मी, विभिन्न यातायात प्रा.ली. लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई वार्षिक उत्वसमा आतिथ्यताका लागि निमन्त्रणा पत्रचार साथै साँस्कृतिक कार्यक्रमको लागि बाल कल्याण नमूना मा.वि. लिबाङ, तुलसी आबासीय मा.वि., ब्राइट फ्यूचर आवासीय मा.वि. र होलीभिजन आवासीय मा.वि.लाई अनुरोध गरिएको छ ।
प्रमुख अतिथि पुनद्वारा पत्रिकाको नव निर्मित भवन उद्घाटन, ‘पुरस्कार वितरण’ तथा सम्मान कार्यक्रमलाई व्यवस्थि गर्न बैठकले पत्रिकाको प्रकाशक÷ सम्पादक मानसिंह विश्वकर्माको संयोजकत्व समन्यय तथा तयारी समिति, कार्यकारी सम्पादक रेशम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा पत्रचार एवं प्रचार प्रसार समिति, खुबिना सुनावरी मगरको संयोजकत्वमा कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति, अस्मिता बुढामगरको संयोजकत्वमा अतिथि सत्कार समिति, नन्दबहादुर बि.क.को संयोजकत्वमा मेष व्यवस्थापन समिति, युगान्त बुढा मगरको संयोजकत्वको मञ्च तथा सांस्कृति व्यवस्थापन समिति समेत गठन समेत गरेको छ । रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका, न्यू रोल्पा स्टेशनरी, रोल्पा अपसेट प्रेसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सहभागिता सम्पन्न बैठकले वार्षिक उत्वस भव्य सम्पन्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य समन्वय गर्ने प्रकाशक÷सम्पादक विश्वकर्माले बताउनुभयो । साथै वार्षिकोत्सवको अवसरमा पत्रिकामा योगदान दिनेलाई सम्मान, उत्कृष्ट समाचारदातालाई पुरस्कार प्रदान, रोल्पा समाचारको सर्बाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिने १० स्थानीयतह, सकारी तथा गैर सकारी सँस्थालाई सम्मान गर्न नामावली छनौट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसमा सबैलाई हाम्रो हार्दिक आमन्त्रण छ । तपाईहरुको आतिथ्यताले हामी र हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै ओझपूर्ण र गौरवमय बनाउने छ ।
अन्त्यमा रोल्पा समाचार साप्ताहिकको १३ वर्षको यात्रामा मेरा ८ वर्षको हिडाई बारे पुस्तक लेख्न खोजे भनेपछि रामायण भन्दा पनि ठूला पुस्तक बन्न सक्छ । मेरो जीवनको भोगाईमा पत्रकारिता पेशा खान, बस्न, सुत्न, हिड्न केहीको पनि ठेगान छैन । भोक, प्यास, निद्रा, समयको कुनै प्रवाह नगरि जोखिम संगै खेल्ने, सत्य अन्वेणषण गर्ने यात्रा निरन्तर जारि रहनेछ । यसमा अझैँ नयाँ सहयात्रीहरु थपिने छन् । समाज रुपान्तरको यात्रा कलमबाटै अगाडि बढाउने छाँै । जतिबेला मृत्यु पनि हुन सक्छ । तर जारी छ । हाम्रो सामूहिकताको यात्रामै हामी गणतव्यमा पुग्न सक्छौँ ।